Hogaamiyaha mucaaradka Turkiga oo la weeraray - BBC News Somali
Kemal Kılıçdaroğlu ayaa ka qeybgalayay aaska askari Turkiga looga dilay xuduuda Ciraaq
Xisbiga CHP ayaa qiray in Mr Kılıçdaroğlu la weeraray, balse ma aanu sheegin inuu dhaawac soo gaaray iyo in kale. Waxa uu intaa ku daray in tallaabo sharci laga qaadi doono "dembiilayaasha falka geystay".
Mr Kılıçdaroğlu ayaa la sheegay inuu fiican yahay.
Xisbiga talada haya ee AKP iyo siyaasiyiinta wadaniyadu ku dheertahay ayaa ku dhaliiyay Mr Kılıçdaroğlu inuu wada shaqeyn la leeyahay xisbiga Kurdiyiinta u janjeera ee HDP. Xisbigaasi ayaa beeniya inuu xiriir kala dhexeeyo xooggaga la dagaallamaya Turkiga.
Dib u tirin lagu sameeyay codadkii la dhiibtay ayaa guddiga doorashada waxa uu ku go'aamiyay in Mr Imamoglu uu ku badiyay codad dhan 13,000, sidaana uu ku noqday maayarka sharciga ah.